तीनदिन देशैभर बदली र वर्षा हुने - मौसम पूर्वानुमान महाशाखा
तीनदिन देशैभर बदली र वर्षा हुने – मौसम पूर्वानुमान महाशाखा
असार २५, २०७५ रासस
काठमाडौँ । आगामी तीन दिनसम्म देशैभर बदली रही अधिकांश स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाले तीनदिनको मौसम पूर्वानुमानबारे आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दिउँसोको समयमा सामान्य बदली र देशका कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षाको सम्भावना रहेको औँल्याएको हो ।
आज दिउँसो देशभरि नै बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षा हुनेछ भने देशको मध्य र पश्चिमी क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । रातिको समयमा पनि देशभरि नै बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षाका साथै पूर्व र पश्चिमका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी असार २६ गते (मंगलबार) दिउँसोको समयमा सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षा हुने सम्भावना छ । साँझ पनि देशभरि नै बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षा हुनाका साथै देशको पूर्व र पश्चिम क्षेत्रका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।
आगामी असार २७ गते (बुधबार) पनि देशभरि नै सामान्य बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षा हुने सम्भावना छ । सोही दिन रातको समयमा पनि देशभरि नै बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यमखालको वर्षा हुने देखिन्छ । साथै मध्य तथा पश्चिम क्षेत्रका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँमा १८.३ मिलिमिटर वर्षा भएको छ । पोखरामा ७०, धनगढीमा १५, डडेल्धुरामा पाँच र ओखलढुङ्गामा तीन मिलिमिटर वर्षा भएको छ । आज काठमाडौँको अधिकतम २७.८ र न्यूनतम २०.५ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
प्रकाशित : सोमबार, असार २५, २०७५१६:४४
साउन १५ गतेदेखि ठमेल र दरबारमार्ग २४ घण्टा खुल्ने !
काठमाडौँमा चिसो बढेसँगै खुला आकाशमुनि बस्ने बेवारिसेहरुको मृत्युका घटना बढ्यो
आफ्नै स्कूल बसको ठक्करबाट ७ वर्षीया प्रतिष्ठाको मृत्यु, परिवारले मानेनन् शव बुझ्न!
सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्दै, २९ ढोका खुल्ला गरियो
घरबासमा पाहुनासँगै क्यामफायर गर्नेको भिड !
स्कुल बसबाट झरेर बाटो काट्दै गर्दा बालकलाई अर्को बसले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै मृत्यु !
मध्यरातको १:३० बजे पूर्वप्रहरी जवानको घाँटीमा चक्कु हानी हत्या: महिला पक्राउ
३९ मिनेट अगाडि PARWATI